Rukova runoyerera ruchibva mutemberi (1-12)
Mvura inoita ichiwedzera kuwanda (2-5)
Mvura yeGungwa Rakafa inonatswa (8-10)
Nzvimbo dzine machakwi hadzizonatswi (11)
Miti yemichero uye yekurapa (12)
Miganhu yenyika (13-23)
47 Akabva andidzosa kusuo retemberi,+ uye ikoko ndakaona mvura yaiyerera ichienda kumabvazuva, ichibva pasi pechidimbati* chetemberi,+ nekuti temberi yacho yakanga yakatarisa kumabvazuva. Mvura yacho yaiyerera ichibva pasi petemberi, kudivi rayo rekurudyi, kumaodzanyemba kweatari. 2 Akabva andibudisa kunze nekugedhi rekuchamhembe,+ akapota neni kuseri, achindiendesa kugedhi rekunze rakatarisa kumabvazuva,+ uye ndakaona mvura yaiyerera ichibva kudivi rekurudyi. 3 Murume wacho paakaenda kumabvazuva aine tambo yekuyeresa,+ akayera makubhiti* 1 000, akaita kuti ndiyambuke nemumvura yacho; uye mvura yacho yaisvika muzviziso zvemakumbo. 4 Akayera mamwe makubhiti 1 000, akaita kuti ndiyambuke nemumvura yacho, uye yaisvika mumabvi. Akayerazve mamwe makubhiti 1 000, akaita kuti ndiyambuke nemumvura yacho, uye yaisvika muchiuno. 5 Paakayerazve mamwe makubhiti 1 000, rwakanga rwava rukova rwandainge ndisingagoni kuyambuka netsoka, nekuti mvura yacho yakanga yawanda zvekuti yaitoda kuti munhu aite zvekushambira; rwakanga rwatova rukova rusingayambukiki uchifamba. 6 Akandibvunza kuti: “Wazviona here izvi mwanakomana wemunhu?” Akabva aita kuti ndifambe ndichidzokera kumahombekombe erukova rwacho. 7 Pandakadzokera, ndakaona kuti kumativi maviri erukova rwacho kwaiva nemiti yakawanda chaizvo.+ 8 Akabva ati kwandiri: “Mvura iyi iri kuenda kunzvimbo iri kumabvazuva uye iri kupfuurira ichienda kuArabha,*+ ichinopinda mugungwa. Paichapinda mugungwa,+ mvura yemo ichanatswa. 9 Zvisikwa zvipenyu zvakawanda zvichararama kwese kuchasvika mvura yacho.* Pachava nehove dzakawanda, nekuti mvura iyi ichayerera ichisvika ikoko. Mvura yemugungwa ichanatswa, uye zvinhu zvese zviri kunosvika rukova rwacho zvichararama. 10 “Vabati vehove vachamira mumativi arwo, kubva kuEni-gedhi+ kusvika kuEni-egraimu, uye kuchava nenzvimbo yekuomesera mambure ekukukudzisa. Pachava nehove dzakawanda dzemarudzi akasiyana-siyana, dzakaita sedzemuGungwa Guru.*+ 11 “Richava nenzvimbo dzine machakwi nenzvimbo dzine matope, uye dzichangoramba dzakadaro. Dzichangoramba dziine munyu.+ 12 “Mumativi erukova rwacho muchamera miti yemichero yemarudzi ese. Mashizha ayo haazosvavi; uye haizomiri kubereka. Ichabereka mwedzi wega wega, nekuti mvura inoidiridza inobva munzvimbo tsvene.+ Michero yayo ichadyiwa uye mashizha ayo acharapa vanhu.”+ 13 Zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: “Nzvimbo iyi ndiyo ichava nhaka yamuchapa madzinza 12 aIsraeri, uye Josefa achapiwa nharaunda mbiri munzvimbo yacho.+ 14 Ichava nhaka yenyu uye muchapiwa nharaunda dzakaenzana. Ndakapika kuti ndichapa madzitateguru enyu nyika iyi,+ uye iye zvino maipiwa kuti ive nhaka yenyu. 15 “Uyu ndiwo muganhu wenyika yacho kudivi rekuchamhembe: Unobvira kuGungwa Guru pedyo nenzira inoenda kuHetroni,+ woenda kuZedhadhi,+ 16 Hamati,+ Bherota,+ neSibraimu, iri pakati peDhamasiko neHamati, uchienda kuHazeri-hatikoni, iri pamuganhu weHaurani.+ 17 Saka muganhu wacho uchatangira kugungwa uchinosvika kuHazari-enoni,+ uchitevedza muganhu weDhamasiko kuchamhembe, uye muganhu weHamati.+ Uyu ndiwo muganhu wekuchamhembe. 18 “Pakati peHaurani neDhamasiko ndipo pane divi rekumabvazuva, uye rinotevedza Jodhani, pakati peGiriyedhi+ nenyika yeIsraeri. Munofanira kuyera kubva kumuganhu wacho kusvika kugungwa rekumabvazuva.* Uyu ndiwo muganhu wekumabvazuva. 19 “Muganhu wekumaodzanyemba uchatangira kuTamari uchinosvika kumvura yeMeribhati-kadheshi,+ wobva waenda kuRwizi* uye kuGungwa Guru.+ Uyu ndiwo muganhu wekumaodzanyemba. 20 “Gungwa Guru ndiro muganhu wekumavirira, kubva panoperera muganhu wekumaodzanyemba kusvika panzvimbo yakatarisana neRebhohamati.*+ Uyu ndiwo muganhu wekumavirira.” 21 “Munofanira kugova nyika iyi kumadzinza enyu 12 aIsraeri. 22 Munofanira kuigovana kuti ive nhaka yenyu neyevatorwa vamunogara navo, avo vava nevana vavowo pakati penyu; vachangoita sevanhu veIsraeri. Pachapiwa madzinza enyu aIsraeri nhaka, ivo vachapiwawo. 23 Munofanira kupa mutorwa nhaka munharaunda yedzinza raanogara naro,” ndizvo zvinotaurwa naChangamire Ishe Jehovha.
^ Kana kuti “kurenje.”
^ ChiHeb., “hova dzacho mbiri.”
^ Kana kuti “nepanopindwa napo muHamati.”